China OEM 30639780 uye 30639781 CONTROL ARMS YeVOLVO -Z5148 vagadziri uye vanotengesa | TANGRUI
OEM 30639780 uye 30639781 CONTROL ARMS YeVOLVO -Z5148
NEI KUDZORA ZVEMAOKO KUKOSHA?
Kudzora maoko kunopa zvese zviri zviviri kubatana uye pivot poindi pakati pekumiswa kwemotokari yako uye chassis. Kazhinji kubatanidza gogo rekutenderedza kumuviri wemuviri, kudzora maoko kunosanganisira majoini ebhora uye bushings ayo anoshanda ari tandem kuchengetedza chaiyo vhiri yekutevera uye chinzvimbo. Semuenzaniso, yakadzika yekudzora ruoko inobatsira mukumisikidza iyo yekureba uye yekumira chinzvimbo chevhiri apo mota iri kufamba.
Chengetedza maoko kudzivisa kuwanda kwemauto ekumisikidza, akadai sekumhanyisa / kubhuroka, kukona pakungotendeuka uye huremu hwakamira hwemuviri wemotokari. Ivo zvakare vane iro rekuwedzera basa rekuchengetedza ine simba vhiri kuenderana. Izvi zvinoderedza ruzha runofambiswa, kudedera kwemugwagwa uye kudedera apo uchipa kuramba kusadikanwa kwekumiswa kufamba.
Zvichienderana nekumiswa kwekumiswa (Multi-Link, MacPherson, Double Wishbone), maoko ekudzora anogona kuwanikwa kumberi nekumiswa kumashure, mune ese epamusoro uye ezasi nzvimbo.
Nokubatanidza kumiswa kwekuruboshwe nekurudyi kwemotokari kubha yekudzikamisa, zvisungo zvinodzikamisa zvinochengetedza mavhiri pakureba kumwechete uye nekudzora roll yemuviri wemotokari.
Chii chinoita kuti masimba edu ekudzora ave makuru? Tangrui inopa matekinoroji kumucheto, nekuvandudza yega yega yekudzora ruoko chinhu. Paavhareji, kuisa edu ekudzora maoko kunotora 30% shoma nguva nekuti iwo majoini ebhora uye bushings akafanogadzirwa. Mainjiniya edu anotarisa pakuita kuti zvikamu zvedu zvive nyore kuisa uye kuvaka kuti vape hupenyu hwakareba hwebasa. Kushandisa kuranga kuyedzwa kwekugara, tinosimbisa dhizaini nyowani nyowani kuti uve nechokwadi chekuti unowana kuita kwaunogona kuvimba.
Mberi ekisero, Kuruboshwe, Zasi VOLVO XC90 [03-11]
Mberi ekisero, Kurudyi, Zasi VOLVO XC90 [03-11]
Pashure: OEM BS1A-34-350 BS1A-34-300 CONTROL ARMS YeMazda -Z5147
Zvadaro: Hight Hunhu Kudzora Arms OEM 54500-3S000 Ye HYUNDAI SONATA-Z5149
Yakawedzerwa Kudzora Arms
Yakatsikwa Simbi Kudzora Arms
Tubular Kudzora Arms
DZIDZISO MAZANO E TOYOTA-Z5144
OEM TD11-34-300B uye TD11-34-350B CONTROL ARMS ...
Tangrui Yakasarudzika Kudzora Arm Inokodzera For ...
Hight Hunhu Kudzora Arms OEM 54500-3S000 Fo ...
8E0407510A CONTROL ARMS YeVolkswagen Passat-Z ...
Mberi Adjustable Kumusoro Kudzora Maoko Akakodzera Fo ...
Shock Inotora Bolt, Wheel Hub, Shock Yekupinza Rubber, Mberi Kudhiraivha Gonhi, Tire Bhora Rakabatana, Hood Shock Inotora,